UBlock Origin: ad blocker maka Google Chrome nchọgharị
Na nso nso a, enwere ọtụtụ mgbasa ozi na Ịntanetị na ọ siri ike ịchọta ebe nrụọrụ weebụ nke nwere ma ọ dịkarịa ala otu mgbasa ozi dị oke oke. Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na mgbasa ozi iwe, njikwa uBlock Orig for Google Chrome nchọgharị ga-abụ ihe ka mma. uBlock Origin bụ ndọtị maka ihe nchọgharị Google Chrome nke na-enye gị ohere igbochi ụdị mgbasa ozi ọ bụla na-eme n'oge weebụ sọọfụ.
Esi kpochapụ kuki na Google Chrome nchọgharị
Kuki bụ ngwá ọrụ nkwado dị mma nke nwere ike ime ka mma weebụ na-egwuwanye, ma ọ dị mwute ikwu na ọnụ ọgụgụ dị elu nke faịlụ ndị a na-edugakarị na njedebe nke Google Chrome nchọgharị. Na nke a, iji weghachite ọrụ mbụ na ihe nchọgharị ahụ, naanị ị ga-ehicha kuki na Google Chrome.
Ihe edokọbara anya site na Yandex maka Google Chrome: nhazi na nhazi
Akwụkwọ edokwubara - ngwá ọrụ a ma ama maka ihe nchọgharị ọ bụla nke na-enye gị ohere ịnweta ngwa ngwa na saịtị ahụ. N'aka nke ya, ibe edokọbara anya bụ ngwá ọrụ dị irè iji gbanwee oghere Google Chrome ọhụụ, nakwa iji dozie ihe kachasị eleta. Taa, anyị ga-elekwasị anya na ibe edokọbara anya site na Yandex ụlọ ọrụ.
ZenMate maka Google Chrome: Nweta ozugbo na saịtị ejiri
Ị nwetụlarị saịtị nke saịtị kachasị amasị gị ma chee ihu na ịnweta ohere, n'ihi na? A kpọchiri akụnụba? Ọ bụrụ na azịza gị bụ "Ee", mgbe ahụ, ntinye nchọgharị ZenMate maka Google Chrome ga-abanye n'aka. ZenMate bụ ezigbo ihe ngwọta maka ịchekwa adreesị IP gị n'ezie, ya mere i nwere ike ịnweta ebe a kpochiri, ọ dịghịkwa ma ọ bụrụ na a gbochibidoro ha n'ebe ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ kwadoro ha site na ikpe ụlọikpe.
FriGate maka Google Chrome: ụzọ dị mfe iji zere blockages
O di nwute, otutu ihe ntanetị a na-ewu ewu na Internet na-egbochi ogologo oge, na-abụkarị n'ihi imebi ikike nke onye nwe ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na i megidere ọnọdụ dị otú ahụ ma chọọ ịga leta saịtị kacha amasị gị, mgbe ahụ, VPN pụrụ iche na-aba uru dị gị uru. friGate bụ profaịlụ nchọgharị ntanetị maka Google Chrome nke na-enye gị ohere ịnweta saịtị egbochi site na ijikọta na ihe nkesa proxy.
Onye ọ bụla na-eji ihe nchọgharị Google Chrome nwere ike ikpebi ma ụfọdụ peeji ọ ga-egosipụta na nmalite ma ọ bụ ma ọ bụ peeji nke a mepere emepe ga-arụ ọrụ na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na, mgbe ịmalitere nchọgharị gị, ihu mmalite mmalite mepere Google Chrome, mgbe ahụ anyị ga-ahụ otu esi ewepu ya.
Chrome PDF Viewer: Google Chrome nchọgharị ngwa mgbakwunye ele PDF
Google Chrome bụ ihe nchọgharị dị ike, nke nwere ike ịmalite ịgbasawanye ya na nkwalite ngwa ngwa. Ma site na ndabara, ihe nchọgharị na-enweghị ihe ọ bụla nwere ntinye ntinye dị mkpa nke na-enye gị ohere iji nlezianya jiri ihe nchọgharị ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ngwa ngwa bara uru dika Chrome PDF Viewer abanyeworị na ihe nchọgharị.
Ntọala zoro ezo na nchọgharị Google Chrome
Google Chrome bụ ihe nchọgharị weebụ na-arụ ọrụ siri ike ma rụọ arụ ọrụ, nke nwere ọtụtụ ihe ọ ga-eme ka ọ dị mma. Otú ọ dị, ọ bụghị ndị ọrụ niile maara na na "Ntọala" ngalaba ahụ bụ naanị obere akụkụ nke ngwaọrụ maka ịrụ ọrụ iji melite nchọgharị ahụ, n'ihi na e nwekwara ihe nzuzo zoro ezo, nke a na-atụle n'isiokwu ahụ.
Esi wepu Google Chrome site na komputa gi
Mgbe enweghị usoro ọ bụla, ọ ka mma ịhapụ ịhapụ ya na kọmpụta ahụ, kama ịme usoro nwepụ dị mfe. Ọ dị mkpa ka ihichapụ ihe omume ahụ kpamkpam ka o nweghị faịlụ fọdụrụ na usoro nke nwere ike ibute esemokwu na usoro. Ihe nchọgharị Google Chrome na-ewu ewu, t.
Otu esi eme ka kuki na Google Chrome
Kuki bụ ngwá ọrụ bara uru nke ihe nchọgharị ọ bụla, gụnyere Google Chrome, nke na - enye gị ohere ịbanyebanye nbanye na paswọọdụ ọzọ na logon ọzọ, ma ozugbo a ga - ebute gị gaa na saịtị profaịlụ gị. Ọ bụrụ na oge ọ bụla ị ga-abanye na saịtị ahụ, ọ bụrụgodị na ị pịaghị bọtịnụ "Puta", ọ pụtara na kuki na ihe nchọgharị ahụ nwere nkwarụ.
Ebee ka ndapụta na nchọgharị Google Chrome
O doro anya na Google Chrome bụ ihe nchọgharị weebụ kachasị ewu ewu. Nke a bụ n'ihi ya n'elu cross-platform, arụmọrụ ọtụtụ, nhazi na nhazi nke ọma, yana nkwado maka ndị kasị ukwuu (ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi) ọnụ ọgụgụ ntinye (tinye-ons). Naanị ebe ebe ikpeazụ dị, a ga-atụlekwa ya n'isiokwu a.
Ihe mere Flash Player anaghị arụ ọrụ n'ime Google Chrome
Mgbasa ngwa ngwa nke ihe nchọgharị Ịntanetị Google Chrome bụ isi n'ihi ọrụ ya na nkwado ya maka nkà na ụzụ Ịntanetị nke oge a, gụnyere ndị ọhụrụ na ọbụna ndị na-eme nchọpụta. Mana ọrụ ndị ọkachamara na ndị nwe ihe onwunwe weebụ na-achọ n'aka ọtụtụ afọ, karịsịa, na-arụ ọrụ na ọdịnaya mmekọrịta nke dabeere na ndabere nke Adobe Flash multimedia platform, na-emejuputa na nchọgharị dị elu.
Esi tinye paswọọdụ na Google Chrome nchọgharị
Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị ọrụ na-eji otu akaụntụ ahụ n'otu oge, mgbe ahụ, ọ dị ezigbo mkpa iji kpuchie data onwe onye site na ndị mmadụ na-achọghị. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ichebe ihe nchọgharị gị na ozi ndị e nwetara na ya site na ndị ọzọ na-eji kọmputa eme ihe, mgbe ahụ, ọ bụ ezi uche ịtọọ paswọọdụ na ya.
Gbanyụọ nkwupụta push na Google Chrome
Ndị ọrụ Ịntanetị nwere ọrụ mara na mgbe ị gara na weebụsaịtị dị iche iche ị nwere ike zute ma ọ dịkarịa ala nsogbu abụọ - mgbasa ozi iwe na mgbasa ozi ntanetị. N'eziokwu, a na-egosi ọkọlọtọ mgbasa ozi megidere ọchịchọ anyị, mana maka ịnata ozi nkwụsị na-ewe iwe, onye ọ bụla na-agbado onwe ya.
Otu esi eji Google Chrome nchọgharị
Ọ bụrụ na ị kpebie ịgbanwe site na ihe nchọgharị weebụ ọzọ na nchọgharị Google Chrome, ị meela nhọrọ ziri ezi. Ihe nchọgharị Google Chrome nwere ọrụ dị mma, nnukwu ọsọ, interface mara mma na ike itinye isiokwu na ihe ndị ọzọ. N'ezie, ọ bụrụ na i jiriwo ihe nchọgharị dị iche iche ruo ogologo oge, oge mbụ ị ga-achọ iji ya mee ihe ọhụrụ, yana ịchọpụta ihe Google Chrome nwere ike ime.
Esi ewepu ihuenyo ntụcha na nchọgharị Google Chrome
N'ụzọ dị mwute, ihe ọ bụla omume na n-nnye nke ịrụ ọrụ na ya nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ na-ezighi ezi. Nke a na - emekarị nchọgharị Google Chrome, nke nwere ike igosi ihuenyo ntụpọ, nke na - apụtaghị ọrụ ọzọ na ihe nchọgharị weebụ. Mgbe ihe nchọgharị Google Chrome gosipụtara ihuenyo ntụpọ, ihe nchọgharị ahụ enweghị ike ịpị njikọ, na tinye-ons kwụsịkwara ịrụ ọrụ.
Ịkpọ oku ọsọ ọsọ: ihe edokọbara anya kacha mma maka ihe nchọgharị Google Chrome
Ihe edokọbara anya bụ ụzọ dị irè na n'ụzọ dị mma iji nweta niile ibe weebụ dị mkpa. Otu n'ime ihe kachasị mma maka nchọgharị Google Chrome na mpaghara a bụ ọsọ ọsọ, ọ bụ maka ya ka a ga-atụle taa. Ịkpọ oku ọsọ bụ nyochaa ihe nchọgharị na-egosi na afọ ole na ole na-enye gị ohere iji gosipụta ibe na ibe edokọbara anya na ntọala ọhụrụ na nchọgharị Google Chrome.
Otu esi eme ka cache na ihe nchọgharị Google Chrome
Ihe nchọgharị ọ bụla na ndabara na-echekwa ozi nke ibe weebụ, nke na-ebelata oge echere na ọnụọgụ okporo ụzọ na-ere mgbe ọ na-emepeghachi ya. Ozi a echekwara abụghị ihe efu ma ọ bụ cache. Taa, anyị ga-ele anya otú anyị nwere ike isi mee ka cache na nchọgharị weebụ Google Chrome.
Otu esi echekwa ibe edokọbara na nchọgharị Google Chrome
Na usoro nke iji ihe nchọgharị ahụ, anyị nwere ike mepee ọtụtụ saịtị, ọ bụ naanị ole na ole ka a ga-echekwa iji nweta ha ngwa ngwa. Maka nke a, e nyere ibe edokọbara na nchọgharị Google Chrome. Bookmark bụ ngalaba dị iche na nchọgharị Google Chrome nke na-enye gị ohere ịnyagharịa gaa na saịtị nke agbakwunyere na ndepụta a.